4 Waxyaabaha ay suuqyadu ka baran karaan Xogta Maalinta Hooyada si loo wanaajiyo Ololaha Maalinta Aabbaha | Martech Zone
Si dhakhso leh boodhku ugama dego ololaha Maalinta Hooyada inta suuqleydu u jeedinayaan Maalinta Aabbaha. Laakiin ka hor inta aan la dhigin howlaha Maalinta Aabbaha dhagax, suuqleyda wax ma ka baran karaan dadaalkooda Maalinta Hooyada oo ka caawin kara inay kor u qaadaan iibka bisha Juun?
Falanqeyn taxaddar leh ka dib maalinta Hooyooyinka ee suuqgeynta iyo xogta iibka, waxaan aaminsanahay in jawaabtu tahay haa.
Bishii ka horreysay Maalinta Hooyada, kooxdeennu waxay xog ka soo ururiyeen in ka badan 2,400 dukaamada tafaariiqda ah ee internetka oo la xiriira ka tegitaanka gaadhiga, dib u suuq geynta emaylka, beddelaadda, iyo iibka. E-tailers-yada aan baranay waxay ahaayeen shan warshadood - Dhar, Kabo & Shakhsi; Bakhaarada Waaxda; Cunto & Cabitaan; Waxyaabaha & Adeegyada Madadaalada; iyo Dukaanleyda Gaarka ah.
Xogtayada 'infographic' ee hoos ku qoran waxay soo bandhigaysaa muuqaalka guud ee xogta, waxaana halkan ku yaal dhawr qodob oo muhiim ah oo ay tahay inay suuqleydu maanka ku hayaan markay wadaan ololahooda Maalinta Aabbaha 2017.
Iibinta Maalinta Hooyo Ma Gaarin Meel U Dhaw Fasaxa
Iyadoo u adeegashada ciidaha waaweyn ee Diseembar ay si xawli ah u socoto Oktoobar iyo Nofeembar, haddana isla sidaas looma dhihi karo Maalinta Hooyada. Iibsashada ugu sarreysa waxay ahayd May 8th, hal toddobaad kahor Maalinta Hooyada. Arrinta xiisaha lihi waxay tahay, maalintii ugu caansaneyd ee ay dukaanleydu wax ku iibsadaan aaladda gacanta waxay ahayd 13-kii Maajoth, taas oo goynaysay si aad ah!
Loogu talagalay suuqleyda qorsheynaya dadaallada Aabbahood Maalinta, meesha ugu weyn ee Maalinta Hooyada laga qaado waa samir. Xaqiiqdii waa muhiim in la bilaabo dadaallada suuqgeynta Maalinta Aabbaha si dhakhso leh halkii laga yeeli lahaa. Laakiin ha ka nixin haddii iibku uusan soo qaadin illaa Maalinta Xusuusta ka dib.
Dib-u-habeynta Email-ku waxay ahayd mid wax ku ool ah Toddobaad ka hor Maalinta Hooyada
Layaab la'aan, maalinta iibka ugu sarreysa waxay sidoo kale ahayd maalintii emaylka dib-u-suuq-geynta sicirka furan uu ahaa kan ugu sarreeya.
Maalinta Aabbaha, hubi inaad qorsheyneyso olole e-mayl ah oo ku saabsan “fursaddii ugu dambaysay” ee usbuuca ka hor Juun 18. Dukaameeyayaashu waxay si cad u soo dhoweeyeen xusuusiyayaashan Maalinta Hooyada, waxayna u badan tahay inay iyaguna yeeshaan Aabbaha sidoo kale.
Heerarka Ka-tagga ee la Shaandheeyey Maalmaha U Horreeya Maalinta Hooyada
Iibinta miisaska iyo mobilada ayaa laga yaabaa inay ugu sarreeyeen usbuucii u horreeyay Maalinta Hooyada, laakiin sidoo kale waxay ahaayeen heerarka ka tagista gaadhiga. Sannadkan, 11-ka Maajo waxay arkeen heerka ugu sarreeya ee laga tago dhammaan maalmaha bisha u horraysa ciida - oo ah fajaciso 89%.
Maalinta Aabbaha, iskuday inaad ka hortagto sicirradan heerka sare ah ee usbuuca u horreeya ciida adoo siinaya dhiirigelinno dheeraad ah goobta. Haddii aad awoodid bixinta lacag la’aan ah, gaarsiinta dammaanad qaadka ah, waxay kaa caawin kartaa yareynta welwelka dukaamaysatada daqiiqadihii ugu dambeeyay ee ahaa in hadiyaddooda aysan ku imaanaynin waqtigeeda.
Maalmaha Talaadada waxay ahaayeen Maalmihii ugu dukaamaysiga badnaa, Sabtiyaguna waa kuwa ugu badnaa
Dukaameystayaasha Maalinta Maalinta Hooyada waxay si cad u adeegsadeen maalmaha shaqada wiiggii, iyo dhammaadka usbuuca wax iibsashada. Haddii aad rabto inaad kordhiso iibinta inta lagu jiro maalmaha shaqada ee soconaya illaa 18-ka Juun, tixgeli inaad maamusho heshiisyada maalmaha shaqada. Tusaale ahaan, dhiirrigelin 24-saacadood ah oo Talaado ah oo ku aaddan Maalinta Aabbaha oo bixisa qiimo dhimis dhammaan iibsiyada, ama hadiyad bilaash ah, waxay u socon kartaa waddo dheer xagga xoojinta iibka Talaadada.
Maaddaama dadku mar hore u janjeeraan inay wax iibsadaan dhammaadka usbuuca, suuqleyda waxay socodsiin karaan ololeyaal dhammaadka usbuuca oo si fudud dadka u xusuusiya inay sameeyaan Aabahood wax iibsashada, oo aysan ku siin dhiirigelin dheeri ah sidaas.
Tags: 2017e-commerceecommerceisbeddelada ecommercehooyooyinka maalintii
10 Nooc oo Kamid ah Ololayaasha Emailka Kiciyay ee Ay Tahay Inaad Hirgaliso
Cajiib. Waad ku mahadsantahay wadaagida tirakoobyadan Terri! Aad waxtar u leh. Waxaan isweydiinayay, saacadee maalinkee waxtar badan leh marka la dirayo joornaalada joornaalada?